Suldaanka cusub ee Cumaan oo wajahaya caqabado aad u waaweyn - BBC News Somali
Suldaanka cusub ee Cumaan oo wajahaya caqabado aad u waaweyn
22 Jannaayo 2020
Image caption Haitham bin Tariq Al Said, oo ay ilmo adeer yihiin Qaabuus, waxaa loo dhaariyay suldaanka cusub ee Cumaan
Markii lagu dhawaaqay geerida Suldaan Qaabuuskii Cumaan horaantii bishan, waxaa daba socday ammaan loogu jeedinayay horumarradii uu sababta u ahaa ninkaas oo loo yaqaannay "aabihii qaranka" - balse waxaa jirtay xaqiiq ah in sannadihii dambe ay jireen dhibaatooyin wiiqayay wanaaggii faraha badnaa ee loo hayay.
Qaabuus wuxuu ku gacan seyray inuu nidaamka dowladnimo ee aasaasiga ah u xilsaaro Ra'iisul Wasaare, sidii horayba uga jirtay Cumaan ka hor inta uusan suldaanka noqonin.
Isla sida ay sameeyeen madaxda isaga la midka ah ee ka taliya dalalka xubnaha ka ah golaha ay ku bahoobeen dalalka khaliijka, suldaan Qaabuus wuxuu caddeeyay mowqifkiisa ka dib markii ay dhaceen "mudaharaadyadii deyrta carabta ee gaaray Cumaan" sanadkii 2011-kii - xilligaasoo ay kumannaan qof waddooyinka isugu soo baxeen iyagoo dalbanaya shaqooyin iyo in musuqmaasuqa la ciribtiro - wuxuuna sheegay in awoodda siyaasadeed, ee isugu jirta sharci dajinta iyo fulintaba, ay gacantiisa kusii jiri doonto, isagoo xiray dood walba oo arrimahaas ku saabsan.
Boqorkii ugu waqtiga dheeraa dunida Carabta oo geeriyooday
Dalka Cuman: Waxaa lagu dhawaaqay boqor cusub
Image caption Suldaan Qaabuus wuxuu ahaa ninkii abid ugu xukunka dheeraa dunida carabta
Xukuumadda Cumaan ayaa markaas sameysay wax ay qaramada Midoobay sanadkii 2014-kii ku qeexday "Dhaqan aamusnaan ah oo dadka oo dhan afka looga wada xiray iyo waliba cabsigalin saameyneysay qof walba oo damca inuu ka hadlo isbaddal ka dhaca Cumaan".
Maalgalinta waaxda amniga waxay ahayd mid mudnaanta koowaad la siiyo, si loo joogteeyo booska ay Cumaan caalamka uga jirto dhinaca dhinaca arrimaha difaaca.
Haddaba, caqabado aad u waaweyn ayaa sugaya suldaanka cusub, Haitham bin Tariq, waana dhibaatooyin ka dhashay carada dhinaca shacabka ee hareytsay 20-kii sano ee ugu dambeysay maamulkii Qaabuus.
Suldaanka cusub, oo dhashay sanadkii 1954-kii, waxaa dhalay nin adeer dhanka aabaha u ahaa Qaabuus .
Haitham wuxuu markii hore kasoo hoos shaqeeyay xog-heynta, ka dibna wuxuu noqday xog hayaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda.
Intaas ka dib wuxuu sanadkii 2002-dii noqday wasiirka dhaqanka iyo hiddaha qaranka.
Haitham, oo wiilkiisa curadka ah ee Dhi Yazin uu xoghayaha labaad ka yahay safaaradda Cumaan ee London, wuxuu ahaa nin ay UK iyo Abu Dhabi doonayeen inuu suldaanka noqdo.
Wuxuu ku naalloonayaa taageerada ciidamada sirdoonka ee cumaan iyo laanta ugu awoodda badan dalkaas ee loo yaqaanno Xafiiska Qasriga.
Wuxuu sidoo kale ka faa'iideysanayaa caannimo shakhsi ahaaneed oo uu ku gaaray ganacsiyadiisa iyo xiriirrada uu leeyahay.
Haitham wuxuu ka mid ahaa raggii ugu horreeyay boqortooyada cumaan ee noqday ganacsatada.
Sanadihii 1990-meeyadii, wuxuu saami ku yeeshay shirkadda wax soo saarka beeraha Sun Farms, taasoo dhul aad u badan ku leh dalka Cumaan.
Ta iyo xilligaas wixii ka dambeeyay wuxuu xoojiyay saameynta ballaaran ee uu ku leeyahay ganacsiga, isagoo madax ka ahaa shirkad weyn oo lagu magacaabo NTC.
Si gaar ah shirkaddan waxay qeyb ahaan u maamushaa shirkadda adeegga korontada ee ugu weyn Cumaan, SMN Power, taasoo ay isla leeyihiin hay'adda Abu Dhabi fund Mubadala, ee uu guddoomiyaha ka yahay dhaxal sugaha imaaraadka Sheikh Mohammed bin Zayed iyo shirkadda awoodda korontada ee Faransiiska uu ku leeyahay isu tagga Imaaraadka Carabta.
Haitham wuxuu sidoo kale saami ku lahaa mashruucii la magac baxay Blue City, oo ahaa mid si weyn uga macaashi jiray arrimaha dalxiiska.
Hase ahaatee maamul xumo iyo musuqmaasuq lagu eedeeyay awggood waa lasii iibiyay mashruucaas.
Image caption Waxaa la sheegay in Qaabuus uu warqad baqshadeysan ku qoray qofka uu door bidi lahaa inuu baddalo, taasoo ay markii dambe fureen golaha qoyska boqortooyada
Saacado yar ka dib markii lagu dhawaaqay geerida suldaan qaabuus, golaha qoyska xukuma boqortooyada ayaa furay warqad xiran oo uu suldaankii dhintay ku qoray magaca Haitham, si uu u baddalo.
Arrintan waxay ahayd mid aad muhiim u ah si loo xaqiijiyo qofka noqonaya hoggaamiyaha cusub.
Suldaanka cusub wuxuu ka faa'iideystay xilalkii uu horay usoo qabtay iyo wadashaqeyntii uu lasoo wadaagay Qaabuus.
Taariikhba unbaa kala caddeyn doonta, laakiin habka uu Haitham dhiso golihiisa wasiirrada ayaa iftiimin doona nooca ay noqoneyso istiraatiijiyadda uu xukunkiisa u sameynayo.
Caqabadda kale ee uu Haitham wajahayo waa sida uu u hirgalin doono habka ay Cumaan uga baxeyso ku tiirsanaanta dhaqaalaha kasoo xarooda saliidda, si loogu gudbo dhaqaale loo wada siman yahay.
Shacabka Cumaan waxay ka mid yihiin kuwa ugu da'da yar caalamka: 46% oo ka mid ah muwaadiniinta dalkaas waxay da'doodu ka yar tahay 19 sano.
Nidaamyada dadka reer cumaan shaqada lagu siinayo waxay ahaayeen kuwo xaddidan 20-kii sano ee ugu dambeysay, waxaa jiray shaqo la'aan baahsan, sinnaan la'aan dhinaca heerarka dhaqaale ee bulshada ah iyo faqri.
Bangiga adduunka wuxuu dadka ay shaqo la'aanta ku heysato waddankaas ee ay da'dooda u dhaxeyo 15 ilaa 24 ku qiyaasay 49%.
Qiimaha dhaqaalaha guud ee waddanka usoo xarooday wuxuu sanadkii 2017-kii hoos ugu dhacay (-0.9%), ilaa sanadkii 2019-kiina wuxuu ahaa mid hooseeya oo ah (0.3%).
Tan iyo sanadkii 2015-kii waxaa jiray astaamaha muujinaya hoos u dhaca dhinaca dhaqaalaha, gobolladuna way kala duwanaayeen.
Arrintan waxay u badan tahay inay si toos ah u saameyso hannaanka maamul ee suldaanka cusub.
Inkastoo aysan Cumaan mustaqbalka dhow lumin doonin saaxiibka ugu qadiimisan ee UK ay ku leedahay dunida carabta, iyadoo taageero siyaasadeed iyo mid milatariba ka hesha UK iyo Mareykanka, haddana Haitham waxaa laga yaabaa inay ku adkaato sidii uu uga takhalusi lahaa faragalinta sii kordheysa ee Imaaraadka Carabta lagu eedeeyo inuu ku hayo madaxbannaanida umaan.
Imaaraadka waa waddanka ugu weyn ee xiriirka dhaqaalaha la wadaaga Cumaan, ganacsiga labadan waddan ka dhaxeeyana waxaa la filayaa inuu sii kordho sannadaha soo socda.
Image caption Suldaanka cusub wuxuu wadahadal la galay hoggaamiyeyaasha gobolka, oo uu nka mid yahay Mohammed bin Zayed, oo ka socda Abu Dhabi
Go'aankii ay Cumaan ku qaadatay sanadkii 2018-kii in muwaadiniinta dalalka khaliijka laga mamnuucay inay hanti ama dhul ka iibsadaan deegaannada u dhow xuduudda Sacuudiga iyo Imaaraadka, ayaa muujinaya walaaca ay xukuumadda Masqad ka qabto dalalka dariska la ah.
Waxaa laga cabsi qabaa in suldaanka cusub uu iska indha tiro hammiga ay boqortooyada Imaaraadka Carabta ka leedahay dalkiisa, isagoo eegaya in Cumaan ay baahi u qabto lacagta Abu Dhabi.
Sanadkii 2013-kii, Haitham wuxuu xubin ka noqday guddi mas'uul ka ah horumarinta istiraatiijiyadda qaran ee Cumaan, kaasoo ah hiigsiga Cumaan ee 2040-ka.
Warbixin ay guddigaas soo saareen bishii January ee sanadkii 2019-kii waxay ku difaaceen in gaar laga dhigo milkiyadda kaabayaasha arrimaha khuseeya bulshada, sida adeegyada waxbarashada iyo Caafimaadka.